I-Studio Esibukekayo - I-Airbnb
Murbach, Grand Est, i-France
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Maud
U-Maud Ungumbungazi ovelele
Ngo-620M le-studio isendaweni enhle kakhulu ohlangothini olulodwa lwe-Galle du Grand Ballon. Ngenhla nje komzana odumile nomlingo wase-Murbach, i-studio ibhekene nentshonalanga ngokuchayeka kahle ekukhanyeni kwelanga nokubukeka okuhle kwengadi nolunye uhlangothi lweSigodi.
I-studio sinenkathi yamathayili abomvu nezindonga ezibheke engadini zefasitela eligcwele kanye neminyango ye-patio, isendaweni yaphansi emibili. Ikamelo elisezansi linombhede olala umuntu oyedwa/usofa kanye nezihlalo ezimbili. Ibuye ibe nomlilo wezinkuni owamukelekile ukuwusebenzisa. Ekhoneni elingakwesokudla, kunekhishi elinesiqandisi nama-hobs angu-2. Itafula elinezihlalo liyatholakala futhi.
Ngenhla ngokuqondile ikamelo lokulala elinombhede olala abantu ababili, ikamelo lokugezela elinendlu yangasese neshawa. Ungangena esitezi sesibili ngezitebhisi ezizungezile.
I-Patio inkulu ngokwanele ukuba ibe netafula elikhulu (elihlinzekwa engadini) kanye nokuphakama kwelanga okuphuma ngomoya. Kukhona ne-barbecue etholakalayo. I-patio iyaqhubeka nokuya otshanini obuyisicaba.
Kukhona okokushisisa ngogesi kuyo yonke indlu kanye nomlilo wezinkuni ekamelweni lengadi obuye ufudumeze ikamelo lokulala.
Wonke amathawula nelineni nakho kuhlinzekwa ngendlela evamile.
4.86 · 147 okushiwo abanye
Umphakathi unokuthula okukhulu, uzungezwe yizintaba, izihlahla, izitshalo, izimbali nezinyoni.
Sabelana nge-le-dit nomndeni othakazelisayo, ohlala ngokuphambene nendlu yethu.
Ngiyakuthanda ukuhlangana nabantu abasha nokuzwa izindaba zabo.
Ukuze uxhumane nami, kungcono njalo ukuthumela umlayezo ngewebhusayithi ye-Airbnb.
Hlola ezinye izinketho ezise- Murbach namaphethelo